Ireto ny sasany amin'ireo fiasa vaovao izay ho avy amin'ny tanan'ny Galaxy Watch 3 | Androidsis
Amin'ny 5 Aogositra, raha mijery ny tsaho samihafa momba ny famoahana Samsung manaraka isika, ny orinasa Koreana dia hanolotra ny taranaka vaovao an'ny Galaxy Note 20 miaraka amin'ny taranaka faharoa an'ny Galaxy Fold. Antenaina ihany koa ny Galaxy Z Flip 5 G sy ny taranaka fahatelo an'ny Galaxy Watch.
Tao anatin'ny andro farany taorian'ny Androidsis dia namoaka lahatsoratra samihafa izay anananay nampiseho ny endriny sy ny sasany amin'ireo mampiavaka azy. Anio dia anjaranao ny miresaka momba ny rindrambaiko sy izay vaovao hampidiriny amin'ny resaka fanaingoana.
- Max Weinbach (@MaxWinebach) Jona 30, 2020
Max Weinbach, mpahay siansa fanta-daza amin'ny ekosistema Android, dia nanararaotra nihazona ny firmware an'ny Galaxy Watch 3 ary namakafaka azy hahitana izay asa hatolony antsika. Ny voalohany indrindra, ary ny manintona indrindra ho an'ny mpampiasa, dia hita amin'ny mety ampanjifaina ny sehatra misy amin'ny fampidirana fampahalalana fanampiny toy ny ora, ny mari-pana, ny dingana vita, ny dia lavitra ... Mazava ho azy fa ity kinova vaovao ity dia hampiditra dialy vaovao ho fanampin'ireo nentim-paharazana izay efa hita ao amin'ny Galaxy Watch 2.
Raha miresaka momba ny fampiharana toetr'andro, ity dia novaina tanteraka mba hampisehoana ny mombamomba ny fampiharana ny toetr'andro, na misy sary miloko, orana, lanezy ... Zava-baovao iray hafa izay ho tonga miaraka amin'ny Galaxy Watch 3 no hita ao amin'ny mailaka tompon-tany, fampiharana izay efa nosoloin'i Outlook. Ny fampiharana Spotify dia ho tafiditra an-tanindrazana sy amin'ny tranga sendra azy, manana endrika vaovao ny mpilalao.
Na dia voalahatra amin'ny daty mitovy amin'ny Note 3 sy ny sisa amin'ireo fitaovana aza ny fanombohana ny Galaxy Watch 20, dia nanamafy i Weinbach fa afaka manolotra amin'ny fomba ofisialy an'ity smartwatch vaovao ity i Samsung 8 Jolay ho avy izao. Na dia marina aza fa ny daty izay miseho amin'ny sehatra dia ny 22 Jolay, ity daty ity dia azo heverina ho azo inoana ihany koa, na dia araka ny filazan'i Weinbach aza dia tsy misy ifandraisany amin'ny fandefasana azy io ary nampiasaina ohatra fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ireo ny sasany amin'ireo fiasa vaovao izay ho avy amin'ny tanan'ny Galaxy Watch 3
Ahoana ny fampiasana ny findainao Android amin'ny monitor faharoa